ऋषि जी, तपाई हिट हुनुहुन्छ र त सबै पछि लाग्छन् : किरण केसी (अन्तरवार्ता) « रिपोर्टर्स नेपाल
ऋषि जी, तपाई हिट हुनुहुन्छ र त सबै पछि लाग्छन् : किरण केसी (अन्तरवार्ता)
प्रकाशित मिति : 2018 March 3, 8:20 am
तपाईहरुको फिल्म शत्रु गतेका बारेमा केही जानकारी दिनुस् न ।
१७ वर्षपछि मह संचारद्धारा फिल्म बनेको छ । यही फिल्मको गित रुपै मोहनीले दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बढि महङ्गोमा विक्री भएको छ । हिजो मात्रै फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरेका छौँ । दर्शकहरुले मन पराउनुभएको छ ।
समग्र चलचित्रमा राजनीतिको प्रभाव कत्तिको देख्नुभएको छ ?
राजनीतिक शुद्धिकरण, पारदर्शी र स्थिरता भएन भने त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ । खुट्टामा ठेस लागेर घाउ भयो भने निधारमा ज्वरो र पसिना आउँछ । राज्य भद्रगोल भयो र राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यसको नकारात्मक असर कला जगतमा पनि पर्छ ।
एउटा गित गाउनुस् ।
उँडाउला पिरतीको बर्को तिमीलाई
मेरै हातको सिन्दुरको धर्को तिमीलाई
नेपालका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी आशावादी हुनुपर्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । मैले पनि उहाँबाट धेरै आशा गरेको छु । उहाँमा भिजन छ तर कामको नतिजा देख्न पाएको छैन । म कुनै पनि दलमा आवद्ध छैन । राम्रो काम गर्नेलाई स्याबासी दिन्छु । नराम्रो काम गर्नेलाई कलात्मक तरिकाले सचेत गराउँछु । ३३ कोटी देवताहरुले सबै नेताहरुलाई सद्वुद्धी दिउन् भन्न चाहन्छु ।
अब देशमा समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ त ? तपाईलाई के लाग्छ ?
मैले आश गरेको छु । आशा गरिएन भने त व्यक्तिको मात्रै होइन देश पनि बन्दैन । निराशाले कसैलाई पनि सफल बनाउँदैन । तपाई भनेको, ऋषि धमला भनेको आशावादी हो । निट एण्ड क्लिन मान्छे हो । देखेको कुरा सत्य बोल्नुहुन्छ र त तपाई हाज हिट हुनुहुन्छ । तपाईको कार्यक्रम, तपाईले बोलेका कुराहरु राम्रा हुन्छन् भनेर त नेताहरु र पत्रकार साथीहरु तपाईको पछि लाग्नुभयो । किन भन्दा त तपाईसँग इच्छाशक्ति छ । त्यसैले हामी सबै आशावादी हुनुपर्छ ।
(नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी)
२०७४ फागुन १९
पुर्वपतिले इन्स्टा,फेसबुक ह्याक गरेको भन्दै राखी सावन्त प्रेमीसँग रोएपछि…
एजेन्सी, २९ जेठ । ड्रामा क्विन राखी सावन्त कुनै न कुनै कारणले चर्चामा रहन्छिन् ।
टप फेसन डिजाइनरको शङ्कास्पद मृत्यु, बाथरूममा भेटियो शव
एजेन्सी, २९ जेठ । टलिउडकी टप फेसन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेलाको निधन भएको छ । उनको
क्यान्सर जित्ने मनिषादेखि सोनालीसम्म, यी हुन् बलिउड अभिनेत्री
एजेन्सी, २९ जेठ । बलिउड अभिनेत्री महिमा चौधरीले क्यान्सरसँगको लडाइँ जितेकी छिन् । अनुपम खेरले
तस्बिरमा हेर्नुहोस् गायिका इन्दिरा जोशीको मेहन्दी फंक्शन
काठमाडौं, २९ जेठ । गायिका इन्दिरा जोशी बिवाह बन्धनमा बाधिँदै छिन् । लामो समयदेखि फेसन
७०० घन्टा लगाएर ब्रिटनी स्पेयर्सको विवाहको पहिरन तयार
एजेन्सी, २९ जेठ । बेलायतकी लोकप्रीय गायिका ब्रिटनी स्पेयर्सले फेरि विवाह गरेकी छिन् । उनले